Kumuu ahaa Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Itoobiya ee la dilay? | Gaaroodi News
Mesfin wuxuu ku dhashay magaalada Adigrat ee dalka Itoobiya 25-kii bishii January ee sanadkii 1949-kii. Waxbarashadiisa culuumta siyaasadda wuxuu kusoo qaatay jaamacadda Bahir Dar isagoo aqoon dheeraad ahna markii dambe kusii bartay jaamacadda Addis Ababa. Seyoum Mesfin, Wasiirkii hore ee Arrimaha dibadda Itoobiya
Mesfin wuxuu aad ula soo shaqeeyay dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo sidoo kale dowladdii ku xigtay ee uu hoggaaminayay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed. Seyoum Mesfin wuxuu kaalin weyn ku lahaa siyaasadda Itoobiya ee ku wajahan dalka dariska la ah ee Soomaaliya
Abiy Axmed wuxuu dabayaaqadii November ku dhawaaqay in guul lagu soo afjaray dagaalkii Tigray, laakiin madaxda TPLF ee baxsadka ahaa ayaa wacad ku maray in ay dagaalka sii wadi doonaan